बुद्धको घरमा रुवाबासी ! वुद्धले फोनमा के भने (भडियोसहित) – Complete Nepali News Portal
बुद्धको घरमा रुवाबासी ! वुद्धले फोनमा के भने (भडियोसहित)
September 23, 2017	319 Views
पोखरा । सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फ्रेन्चाईज शो नेपाल आईडल को उपाधी पोखरा का बुद्ध लामाले हात पारेका छन् । कतारको एम्पिथिएटर मा सम्पन्न फिनालेमा अन्य २ प्रतिस्पर्धी लाई दर्शक भोटले हराउदै लामाले उपाधी हात पारेका हुन् ।